IChiefs encane ivulele umpetshisi kwiSundowns
UKAMOHELO Hoala weKaizer Chiefs ophume namagoli amathathu bethela phansi iMamelodi Sundowns ngo 4-1 emdlalweni weDStv Diski Challenge izolo eJohannesburg Stadium Isithombe: BACKPAGEPIX
IKAIZER CHIEFS izigwazele ibhece kwiMamelodi Sundowns iyitalabha ngo 4-1 emdlalweni weDStv Diski Challenge eJohannesburg Stadium, eGoli izolo ntambama.
Amagoli aweze ngelibanzi iChiefs, abekwe enethini nguKamohelo Hoala oshaye amathathu ngomzuzu ka-11, 41 noka-43 nelikaTshepo Mohlala elingene ngoka-81.
Ukunqoba kwesikwati seChiefs esiqeqeshwa ngu-Arthur “10111” Zwane, kusenze saqhubeka nokuhlala phezulu esicongweni se-log kaGroup B kwiDiski Challenge, ngamaphuzu angu-12 emidlalweni emihlanu. Lokhu sekwenze yabukeka ikhanya indlela yaso yokuyodlala emidlalweni eyandulela owamanqamu.
Iqembu elizoqeda phezulu kumaqoqo amabili eDiski nelesibili yiwona azodlulela kweyandulela owamanqamu.
Lo mdlalo uqale ngegiya eliphezulu njengoba womabili amaqembu abehlaselana engakhombisi ukwesabana. Ngomzuzu ka-11 ukaputeni waMakhosi uSabelo, uqhamuke nomnyakazo omuhle, ethumela ibhola elide phambili lahlangana noHoala ongacucuzanga ukulibeka enethini engasabonwa ezintini uGlen Baadjies ovimbela amaBrazilians, acijwa nguSurprise Moriri.
Ngemuva kwegoli leChiefs, nabafana beDowns baqalile ukuziqoqa njengoba besebehlasela bephindelela emapalini eChiefs abegadwe nguBontle Molefe.
Akumangalisanga ukuthola kweSundowns igoli lokulinganisa ngomzuzu ka-19 elishaywe ngu-Ofentse Mashiane obethole ibhola eliyikhona ebithathwe nguThando Buthelezi.
Ngemuva kokuthola igoli lokulinganisa, abafana bamaBrazilians kube sengathi bathelwe ngezibonkolo njengoba bebelokhu bengqongqoze njalo emnyango wabafana beziMpofana.
Ngomzuzu ka-26 noka-28, uMolefe weChiefs usebenze umsebenzi omkhulu evimba amabhola amabili abethunyelwe kuye nguButhelezi weSundowns.
Ngemuva kwalokhu iChiefs ibuye nayo yaqala ukuhlangana. Ngomzuzu ka-41 ithole igoli lesibili ngonyawo lukaHoala obethole ibhola ebelivela kuMthokozisi Balakazi.
Ngomzuzu ka-43 ubuyile futhi umthakathi wezindaba uHoala wabeka elesithathu enethini.
Esiwombeni sesibili abafana beSundowns bazamile ukuvuka bazithintithe kodwa kwala kona ukuthi udonga lwasemuva lweChiefs obeluholwa nguJordan Sampson ngokubambisana no-Aden McCarthy, belungafuni lutho oluzothinta unozinti walo.
Ngomzuzu ka-78, amaBrazilians abeneshwa ngesikhathi unompempe obephethe umdlalo, uXola Sitela, ekhiphela ngaphandle ngekhadi elibomvu uKarabelo Ramakepa ngemuva kokudlalisa kabi uTshepo Mohlala weChiefs.
Ngomzuzu ka-81 uMohlala ushayele iChiefs igoli lokuvala inkundla ngemuva komnyakazo omuhle obuqhamuke noHoala ogcine eqokwe njengomdlali wosuku.
Imiphumela yeDStv Diski Challenge:
Bloemfontein Celtic 2-0 Tshakuma, Orlando Pirates 2-3 Swallows, SuperSport United 4-3 Maritzburg United, Baroka FC 1-2 Black Leopards, TS Galaxy 0-0 AmaZulu FC, Lamontville Golden Arrows 4-2 Stellenbosch FC, Cape Town City 2-0 Chippa United, Kaizer Chiefs 4-1 Mamelodi Sundowns.